September 23, 2016 –Maanta oo ah maalin Jimco ah ayaa waxa ay ku beegantahay maalintii ay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ go’aamisay in ay soo af jari doonto dhagaysiga dacwadaha ay soo kala jeedinayaan labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya.
Magaalada Hague ee dalka Holland oo ah goobta ay ku taalo maxkamada ICJ-ga ayaa waxaa weli ka socda doodo illaa iyo Isniintii soo dhex marayey qareenada Soomaalia iyo kuwa Kenya oo ku aadan muranka dhinaca Badda.
Doodahan oo ay dhageysaneysay Maxkamadda Caalamiga ah oo ay Somalia dacwad u gudbisay, ayaa Soomaaliya ay ku dooneysaa in maxkamadda ay qaado kiis ku saabsan xadeynta xuduudda badda ee labada dal.
Dhinaca kale, Kenya ayaa waxa ay weli ku adkeysaneysaa in maxakamaddu aaney qaadi karin maadaama ay Soomaaliya horey ula saxiixatay heshiis is-afgarad ah.
Hadaba Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ku suggan magaalada Hague ee dalka Holland ayaa waxa uun laanta afka-Soomaaliga ee VOA-da uga waramay dooda ugu danbeysa oo ay Soomaaliya maanta Jimco ah soo jeedin doonto.